Imveliso yentsapho yeCadCorp - Geofumadas
NgoFebruwari, 2008 ArcGIS-ESRI, Cadcorp
Sasisandul 'ukubonisa iimveliso zeentsapho ze-ESRI, zombini ArcGIS ye desktop njenge kwandiswa eziqhelekileyo
Kule meko, siza kuthetha nge-CadCorp yintsapho yemveliso, kwimeko yezicelo ze desktop.
Enye yeengxelo eziphambili zeCadCorp kukugxininisa ekuxhaseni imigangatho ye-Open Gis Consortium (OGC) eli lizwe elijolise ekuchazeni iqoqo elibanzi leenkcukacha ezivulekileyo ze-GIS.
Enye into yokuba iCadCorp inokugxininisa kakhulu kukufumaneka plugins ukufunda, ukungenisa, amazwe okanye banxibelelane data evela namanye amashishini CAD / GIS ezifana ArcGIS, AutoCAD, Microstation, MapInfo, Oracle, SQL kunye nabanye.
Kwakhona kunomdla kwiifowuni ukufikelela kwedatha kwabelwana imithombo eyahlukeneyo njengoko GeognoSIS.NET (OpenStreetMap, Google Earth KML, NASA kunye DataMap sia) kunye GoeRSS, eyisebenzisayo, ArcIMS.
uhlobo Demanejar ngedatha Cadcorp yahluke gqitha ukusuka ingqiqo ArcGIS MXD kunye okulapho kuthi of ngezifo, nangona ingaphatha iinkcukacha yangaphandle, kananjalo ledatha kunye nemephu ingaba ifayile enye. Ngaphambili iifom ezisetyenziswayo ziyi - .bds, okwangoku ifomati .sds isetyenziswe, oku kuvumela abasebenzisi abasebenzisanayo kwifayile enye.
Imveliso yesiseko seCadCorp ifanayo imodeli yoshishino iSRI, ngoxa izixhobo ezihamba kwiMaphuViewer kuya kwiModeli yeMephu zilingana nezo ze-ESRI eziphuma kwi-ArcReader ukuya kwi-ArcInfo. Nangona lo mze keliso nje "kwindlela yokwenza izinto" ebonakalayo, i-CadCorp inegunya elithile i-ArcGIS ayinayo. Inzuzo kukuba izandiso azange zahlakazeka phakathi kweenkulungwane ze-ESRI nangona kubonakala ngathi umgangatho wokuthunyelwa kunye nemveliso yokugqibela ayifinyelelanga ngendlela efanayo nemveliso eyenziwe yi-ArcGIS okanye asibonise.
1 Umbukeli weMaphu
Lo ngumfundi weemephu, elilingana ne-ESRI ArcReader, Ungabona ngakumbi 160 iifomati GIS data / BD phakathi kwabo ezifunyenwe ArcView SHP, Ordnance Survey NTF kunye MasterMap, MapInfo PHAKATHI / MIF / TAB, AutoCAD DWG kunye DXF, Microstation DGN, ECW, GeoTIFF, FME, XML, GML, MrSID, Oracle Spatial kunye nabanye. Iqulathe imisebenzi esisiseko yoboniso lamanqanaba, ukubonisa weendawo, ukubonisa tabular, ushicilelo kunye nezinye izinto eziyimfuneko.
Ngaphambili Umbukeli weMaphu Yayikhululekile, ngoku ayikho, kwaye bayifake kwiimarike mahhala Umfundi weMaphu nangona nangaloo mntu ungabona kuphela iifayile ezenziwe ngeemveliso zeCadcorp kwifomethi ye-pwd.
2 Umphathi weMephu
Oku kwaziwa ngokuba ngumphathi weemephu, elilingana neArstView ye-ESRI kwaye ivumela ukuthabatha, ukuhlela, ukusebenzisa, ukujonga, ukuhlalutya nokuthumela idatha yendawo. Umdla onomdla weCadCorp Imephu yeMenenja kukuba phantse nayiphi na umsebenzi unayo idilesi yokusebenza, ngokukodwa ukukhangela kwendawo, ukubonisa kunye nokunyathelisa kubalulekile. Ikunye neenkqubo ze-250 zokulungelelaniswa kweemephu, ezinokuthi zenziwe kwi-fly kwaye ziboniswe kwiindawo ezifanayo zeemephu kunye nezicwangciso ezahlukeneyo.
Enye into ebangel 'umdla yinto yokuguqula imephu evelisiweyo yokuhlalutya ngokucacileyo kwimephu entsha, ngokuklikha ngokukodwa ... ukugcina ubudlelwane kunye neyayimvelaphi!
3 Umhleli weMephu
Oku kwaziwa njengeMaphu Editor, kwaye inikezela izixhobo zoMphathi weMephu, kwandisa ukufakwa kwedatha eyongeziweyo kunye ne "CAD style" amathuluzi okuhlela, nangona ihlala ishiya kakhulu into efunwayo, yinto enamandla ngakumbi kuneArcView kwaye ingabi zeMpawu. Kwakhona kukho izixhobo eziphambili zokuhlalutya indawo, ukuveliswa kweenkcukacha zolwazi kunye nokuhlalutya kweengqondo. Kufana neArcEditor kwintsapho ye-ESRI.
Kwakhona unalo Umhleli ubunakho Map akanaye ithuba yokugcina idatha Izinto Lokubini Esikhulu (amaqampu) lweNdawo Iformix Datablade, kunye estendido OpenGIS ukufikelela SQL zedata nge Izinto Active X Data (kokuchitha).
4 Imephu yeModeli
Oku kwaziwa ngokuba iimaphu modeler, kwaye kudibanisa ukusebenza uhlalutyo phambili, ulawulo tridimencional, kuquka ukuveliswa umphezulu, extrusion, inkxaso imifuziselo ntlango lwedijithali (DTM), unako kwakhona ukubamba umfanekiso yeraster kwi umphezulu bafaniswe kwaye i OpenGL ukubonisa ubunakho. Akuhambelani neArcInfo kwintsapho ye-ESRI.
Kwesinye isithuba siza kubona izandiso zayo zentuthuko.
Iwebhusayithi esemthethweni yeKadCorp: http://www.cadcorp.com
Ukulayishwa kwe CadCorp:
Post edlulileyo«Edlulileyo Izandiso zeArgGIS
Post Next Izixhobo zophuhliso zeCadCorpOkulandelayo "